2019 Ahoana ny fanaovana testosterone enanthate homebrew ao amin'ny dingana 6
/Blog/Gallery/2019 Ahoana ny fanaovana testosterone enanthate homebrew ao amin'ny dingana 6
Posted on 05 / 07 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Ny zava-drehetra momba ny foibe testosterone enanthate
1. Inona no atao hoe testosterone enanthate
2. Inona no mahatonga ny Testosterone enanthate ho an'ny vatanao
3. Ahoana no fomba hahatonga ny Testosterone Enanthate hizara amin'ny dingana
4. Ny Testosterone Enanthate dia miboridoha tsikelikely
5. Atombohy amin'ny homosexuel ny testosterone
Ity lahatsoratra ity dia manome fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny fomba azonao anaovana testosterone enanthate homebrew. Izy io ihany koa dia manazava ny soa entin'ny Testosterone Enanthate.
Inona no testosterone enanthate
Miaraka amin'ny fitomboan'ny fambolena malaza kokoa, ny olona dia mijery foana ny zavatra izay afaka manampy azy ireo hahazo tombony kokoa noho ny hafa. Ohatra iray amin'izany fanampiana izany dia ny testosterone enanthate izay iray amin'ny steroids testosterone ampiasaina indrindra. Izy roa dia androgen ary Anabolic steroids.
Na dia voarara aza ny fampiasana azy, dia mbola anisan'ny tadiavina amin'ny endri-borona indrindra izy io. Tsy ny soa ihany ho an'ny mpanao biriky fotsiny ihany fa mahasoa koa an'ireo mampiasa azy amin'ny fitsaboana fitsaboana testosterone, ho an'ny olona miodina ny fanondranana ny lahy sy ny vavy ary ho fitsaboana ny fihoaram-pefy.
Inona no mahatonga ny Testosterone enanthate ho an'ny vatanao
Ny Testosterone Enanthate dia voaporofo fa manampy amin'ny fanarenana vatokely izay mamokatra haingana ny fanarenana ny vatana. Amin'ny fampitomboana ny famokarana proteinina, dia manampy amin'ny fanafody ny vatany na dia efa niasa mafy aza izy tao amin'ny gym. Vokatr'izany dia afaka miezaka mafy ianao ary hahita ny vokatry ny asanao.
Na dia maro aza ny olona no mahatsapa fa manao fanatanjahan-tena izy ireo, tsy mihinan-kanina be loatra ary tsy manary ny fatin-tsolika tiany ho very, testosterone Enanthate dia efa voaporofo fa nahomby izany. Ny mahagaga dia hoe raha mpandidy bodista ianao, dia tsy ho very ny hatokao anao fa ny tavin-kena izay manafina azy ireo.
Ny dikan'izany dia ny fihazonana ny hozatrao, ary ny tsaratsara kokoa dia azon'izy ireo voafaritra kokoa. Vitsy ny fatin'ny vatana hahatonga anao hikolokolo sy hiaina fiainana lava kokoa.
Mihamatanjaka ny hozatra
Raha trano fanasan-damba ianao, dia ho tsapanao fa misy ny testosterone Ny fambolena bakteria dia lavorary. Manampy izany amin'ny alalan'ny fampitomboana ny famokarana sela mena ao amin'ny tsokan'ny taolana. Ny testosterone enanthate ihany koa dia manakana ny vokatra cortisol, hormone izay miasa amin'ny fampiterahana ny hozatra ka mahatonga azy ho very.
Mba hampiakarana ny vatomizana lehibe dia tsy maintsy manana hery bebe kokoa ianao. Ny antony iray mahatonga ny mpanao biriky maro hanao zavatra mba hampivelarana ny tanjany dia satria misy ifandraisany amin'ny tombony midadasika eo amin'ny vatany. Ny testosterone enanthate dia iray amin'ireo fitsaboana tsara indrindra izay hanampy anao hanatanjaka hery bebe kokoa ahafahanao mampiakatra ny lanjany izay efa nirinao hatramin'izay.
Ahoana no fomba hahatonga ny Testosterone Enanthate hizara amin'ny dingana
Ataovy ny anao homebrew Testosterone Enanthate dia mety ho tsotra na sarotra, araka ny fisafidiananao azy. Maro ny olona mety hanakivy anao amin'ny siansa marobe ao anatiny, fa hampiseho izany amin'ny fomba tsotra kokoa. Ireto ny fepetra takina sy ny dingana amin'ny dingana momba ny fomba ahafahanao mandoro ny Testosterone Enanthate;
Vovonan'ny testosterone enanthate: grama 62.5
Dipoavatra mavo: 148.13ml
Mitombo ny tanana
Folo folo vials tsirairay manana mln 10 (Ny kitapo rehetra dia tokony misy kapaoka, fingotra, ary ny tavoahangy.)
20mL / 60 ml syringe izay manana kofehy 18-21.
3mL syringe miaraka amin'ny kofehy 18-21
Glass Rod sy 100mL Beaker
Ny Testosterone Enanthate dia miboridoha tsikelikely
Dingana 1: Vovoka testosterone enanthate.
Dingana 2: Ampidiro vovoka, BA, ary BB ao anaty baoritra
Dingana 3: Hevero ny fantsakazo ao anaty rano
Dingana 4: Manasà solika mena
Dingana 5: Filetahana
Dingana 6: Mametafeta azy ireo amin'ny kapoakany
Ireto ny dingana antsipiriany momba ny tokony hatao.
Dingana 1: Vovoka testosterone enanthate
Hevero ny Testosterone enanthate powder mba hahazoana antoka fa ampiasainao ny habetsaharetsa tokony hampianao ny homebrew. Mba hahazoana ny lanjany dia ahazo sombin-taratasy kely ary apetraho eo amin'ny ambaratonga.
Mba hahazoana antoka fa tsy ampidirinao ny lanjan'ny taratasy rehefa mavesatra ny vovo-dronono, tsindrio ny tarehimarika mba hametrahana ny haavony ho zero. Azonao ampidirina tsikelikely ny vovo-dronono mba tsy hametrahana loatra loatra izay mety ilainao hanesorana hatrany.
Indraindray ny vovony dia mety handanja kely loatra ka mety ilainao ny mamerina izany foana isaky ny mila ampiana. Ny fomba tsara indrindra hikirakira azy dia amin'ny famenoana volo kely ary tsindrio eo amin'ny lanjany amin'ny fampiasana ny rantsan-tànanao ary avelao ny isa hiverina hiverina. Raha vao azonao antoka fa noraisinao tsara ny grama 25 anao, dia tsara izao ny mandeha. Mandanja ny vovo-dronono ho an'ny testosterone mba hahazoana antoka fa ampiasainao ny habetsaharainao izay ilainao hamokarana ny homebrew
Apetraho ao anaty baoritra ilay vovoka matevina.
Add 2ml amin'ny Benzyl Alcohol sy 2ml Benzyl Benzoate.
Ny andraikitra voalohany amin'ny fampidirana alzôzy Benzyl dia ny manao asa fanafody. Izy io koa dia miasa tsara toy ny solvent izay koa mitazona ny menaka rehetra sy ny vovoka amin'ny toerana iray. Ny Benzyl Alcohol koa dia solvents dia nampiasaina betsaka, ary ny tombontsoa azo avy aminy dia ny manampy amin'ny tsy fahampian-tsakafo.
Ity dingana ity dia tsy azo atao, saingy raha tianao ny handehandeha amim-pahombiazana, dia tsy tokony hialanao izany. Mitondra vilany iray ary fenoy rano iray eo ho eo. Apetraho amin'ny loharano hafanana izy io, ohatra, ny fatana ary avelao hafana.
Makà lasopy ary ampidiro ao ny baoritra. Apetraho ao anaty rano santimetre ny roapolo. Mijery ny vovony ary mijery raha mamafa izany mandra-pahatongan'ny mazava. Ny vahaolana mazava dia midika fa mihintsana ny famolahana.
Izany rehetra izany dia manampy amin'ny famongorana ny vovoka tanteraka ao amin'ny solvent. Mankanesa any amin'ny dingana manaraka rehefa tsy misy poizina hita.
Miandrasa ny famokarana hanala kely kely ary ampio ny dipoavatra kely ao anatin'izany. Azonao atao ny mampihetsi-jaza kely kely kokoa hanaovana fanivanana.
Ny menaka voa nambolena no renin'ny hafa rehetra hafa izay mitondra fiara. Inona no mahatonga azy io tsaratsara kokoa amin'ny fampiasana azy noho ny hafa, fa mendri-kaja izy io ary misy fananana an-keriny. Ankoatra izany, manampy amin'ny fanarenana ny tranon-jaza izy io ary hamafana ny zava-drehetra ho an'ny fahasalamanao! Tsy voatery hijaly noho ny fihetsika mahatsikaiky vokatry ny menaky voaloboka ianao.
Ny dingana manaraka tokony horaisinao dia ny hamolavola ny vahaolana amin'ny fitiliana izay hampiasainao hanivanana. Afaka mampiasa herinaratra lehibe ianao na kely kokoa ary misafidy ny hamerina imbetsaka ilay dingana.
Atsofohy ny sivana 0.22um avy amin'ny kitapony ary alamino ny fanjaitra maitso eo amin'ny lafiny kely ary ampiharo amin'ny tady. Ampiasao ny totozy alkaola, esory ny tendrony amin'ny tsiranoka tsy mamokatra ary ampidiro ao ny fanjaitra maitso. Apetaho ilay fanja izay mifatotra amin'ny sivana manerantany ao anaty vovobony.
Ity dingana ity dia dingana tena goavana, ary ny steroïde rehetra dia tsy maintsy mandalo izany. Ara-dalàna fa mety ho voasakana ny sivana mandritra ny fizotran'ny filtration. Ho vokatr'izany, dia ho hitanao fa mihamitombo ny dingana. Raha te hanohitra izany, manolo ny sivana miaraka amin'ny iray vaovao mba hamonjy anao ny hirifiry tsy maintsy miandry.
Na izany aza, mila marihinao fa ny fotoana alaina hanivanana vahaolana dia miankina amin'ny steroid sy ny mg / ml ny vokatra.
Raha vantany vao vita ny fanasivanana ao amin'ny voly tsiranoka, dia vita ny dingana.
Hamaky ny vahaolana amin'ny fampiasana kapila manify.
Atombohy amin'ny homosexuel ny testosterone
testosterone homebrew steroid dia ny tsara indrindra azonao atomboka satria ny vatanao dia mahazatra azy. Vita amin'ny vatany izy io ary manampy azy hitombo, hanamboatra ary hivoatra.
Rehefa ambany ny testosterone dia misy ny fitomboan'ny tavy sy ny lanjany. Ny fitsaboana amin'ny testosterone no fomba tsara indrindra ahafahanao manatontosa ny atletisma, ny fiaretana tsara kokoa, ary ny hozatra mafy kokoa. Raha mikasa ny hanavao ny vatanao ianao, dia tokony hihevitra ny hametaveta ny hommeidinao amin'ny fampiasana Testosterone.
Ny olana mitranga amin'ny fanolanana steroid dia homena anao fa mety tsy hatoky ianao fa hanome anao ny vokatra izay mendrika anao. Na dia aorian'ny fanarahana ny tsiambaratelo marina aza dia ho hitanao fa tsy matoky tanteraka ny zavatra nataonao ianao. Maro ny olona mamorona ny steroid amin'ny fampiasana azy io ho toy ny fitsapana sy ny hadisoana.
Raha tsy manana fahaizana laboratoara ampy ianao, dia tsy tokony hiditra amin'io dingana io ianao satria mety hampidi-doza anao izany. Araka ny hita ao amin'ny lahatsoratra dia mila fitaovana fotsiny ny laboratoire fototra ianao saingy tsy ampy ny dingana kely dia mety hahatonga anao ho olana lehibe amin'ny ankapobeny avy amin'ny dingam-pitsaboana. Izany dia satria ny fikarakarana ny steroid ho an'ny homebrew dia tokony ho mamaivay mialohan'ny hidirana azy. Midika izany fa mila mitandrina tsara ianao mandritra ny fiomanana. Ny tsy manana maso tena tsara dia mety hahatonga anao handratra ny tenanao amin'ny fiezahana hamokatra zavatra izay azonao novidina readymade.
Mba hahazoana antoka fa mandray ny dosage tsara sy ny kalitaon'ny Testosterone Enanthate ianao, tokony handinika ny fametrahana amin'ny steroid efa natonta. Tsy ho azo antoka ho anao izany fa ho mora kokoa amin'ny fampiasana azy.
Ny famokarana steroids homebrew dia mahasoa satria manampy azy amin'ny fanatontosana ny toetranao tsara indrindra ao amin'ny gym tsy mila mandady lalindalina kokoa ny paosinao. Mety hanolotra safidy tsara kokoa ho an'ny steroid hafa ihany koa ireo mpamatsy mpamaham-bolongana mamatsy eny an-tsena. Afaka mamokatra vokatra avo lenta tsara ianao miaraka amin'ny fantsom-bokim-pampianarana Testosterone tsara indrindra omena etsy ambony.
Anabolic Steroids sy ny fanaovana azy, Profesora Frank, pejy 1-42
Testosterone: Fanimbana fanavakavahana, Eberhard Njeschlag, Hermann M. Behre, pejy 330-339
Ahoana no fomba hifidianana mpamatsy poids amin'ny steroids ao amin'ny 12 Dingana Ahoana ny fomba fampiasana Recipe trenbololone mba hanamboarana mofomamy fanosehana vatolônôna 2019